Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Photo & Video ka Nokia Phones
I CAAWI!! Kabsado tirtiray sawir / video ka Nokia?
Hi oo dhan, waxaa suurto gal ah inuu ka soo kabsado laba qof oo ah video / image files si qalad ah la tirtiro xalay ka xusuustaydu ballaaran ee Nokia?
Phone aan la isticmaalay tan iyo markii ay taasi dhacday ... fikrado kasta? Waxay ahayd video of our ina iyo isku daygii ugu horreeyay ee ku gurguurta.
Jooji isticmaalka telefoonka ka dib markii uu shilka. Waa wax weyn. Haddii aad ku adkeyso adiga oo isticmaalaya telefoonka in ay toogtaan videos cusub iyo sawirada, faylasha tirtiray la overwritten doonaa iyaga, taas oo ka dhigaysa kabashada dhib badan, xitaa macquul aheyn. Tani waa dareen caadi ah oo wax ku ool ah, si looga aqbalo mid ka mid kasta. Ka dib markii in, waxa aad awoodi kartaa inuu ka soo kabsado sawiro iyo videos ka taleefannada gacanta ee Nokia si fudud marka aad soo gaarto meel shil ka takhalusid.
Kabsado photos & videos ka Nokia telefoonada gacanta ee saddex tallaabo
Waa sahlan tahay in aad ka bogsato sawirada tirtiray iyo videos taleefanada Nokia saddex tallaabo. Marka hore, waxaad u baahan tahay codsi soo kabashada ee telefoonada Nokia ah. Weli ma haystaan ​​aragti? Halkan yimaado aan talo aad u: Wondershare Photo Recovery , ama Wondershare Photo Recovery for Mac (la heli karo Mavericks).
Labada codsiga si buuxda u taageeraan dib u soo kabashada ee dhammaan noocyada kala duwan ee taleefannada gacanta ee Nokia, sida Nokia C3, C503, 5230, Lumia, N9, N97, iyo N8 iyo wixii la mid ah. No arrinta haddii aad qaab ama tirtirto telefoonka, ama files yihiin geli karin sababo kale, barnaamijka aad u saamaxaaya in ay dib u soo ceshano oo dhan oo iyaga ka mid istareexsan.
Isku day version maxkamad free of this Nokia software kabashada telefoonka gacanta hadda. Dooro version saxda ah ee computer.
Tallaabada 1 Connect aad telefoonka gacanta ee Nokia in kombiyuutarka
Tallaabada koowaad waa in lagu xiro aad telefoonka gacanta ee Nokia in kombiyuutarka la cable ah digital, ama aad qaadi karto kaadhka xusuusta ka soo telefoonka oo ku xirmaan akhristaha kaarka. Si kastaba ha ahaatee waa OK. Markaas ordi barnaamijka iyo telefoonka gacanta kabashada "Start" Nokia.
Tallaabada 2 Scan sawir & video on your Nokia telefoonka gacanta
Dooro Jidka drive aad mobilephone Nokia oo guji "Scan" si aad u ogaato sawiro iyo videos tirtiray ku saabsan telefoonka.
Tallaabada 3 kabsado tirtiray Nokia sawirada & videos
In natiijada scan, sawirrada ah oo dhan tirtiray, videos iyo music waxaa la helay iyo soo bandhigay qaybaha. Waxaad ku eegaan karo iyo hubi in ay iyaga oo dhan la badbaadiyo on your computer la mid click on badhanka ah "Ladnaansho".
Fiiro gaar ah: Ha mar badbaadin xogta soo kabsaday aad Nokia telefoonka gacanta ama kaadhka xusuusta. Raadi meel kale, waayo, sida on your computer ama disk kale dibadda, Ammaanka awgiis.
Video tutorial ee telefoonka gacanta kabashada Nokia
Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Pictures ka HTC Cajiib ah
Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Messages ka Motorola Droid Razr
Siduu u Panasonic HDD Recovery
XLSX Recovery: Ladnaansho tirtiray ama formatted XLSX Files in 3 Talaabooyinka
> Resource > Ladnaansho > Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Photo & Video ka Nokia Phones